“Ma niyad jabi doono la’aanta Neymar Jr” – Gool FM
“Ma niyad jabi doono la’aanta Neymar Jr”
(PSG) 28 Jan 2019. Difaaca kooxda Paris-St Germain Presnel Kimpembe ayaa ka hadlay sida uu uga xun yahay dhaawaca soo gaaray saaxiibkiis reer Brazil ee Neymar Jr, iyo mudada uu garoomada ka maqnaanayo.
Wargeyska Le Parisien ee dalka France ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay difaaca kooxda Paris-St Germain Presnel Kimpembe wuxuuna yiri:
“Waxaan halkan u joognaa inaan shaqeyno, dhamaantayada waxaan ka xunahay dhaawaca soo gaaray Neymar Jr, laakiin waa inaan si fiican u shaqeynaa isaga la’aantiis”.
“Wax walba si fiican ayay u socdaan, taas micnaheedu maaha inaan niyadjabi doono, isla markaana aan tababarka ku sameyneyno xaalad xun, waxaan isku dayaynaa inaan sii ahaano sida aan maalin kasta soo ahayn”.
Neymar Jr ayaa dhaawaca uu haatan qabo wuxuu soo gaaray todobaadkii hore, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dhaawaca uu la mid yahay sida kii soo gaaray xili ciyaareedkii hore.
Radio Monte Carlo ayaa xaqiijiyay in Neymar Jr uu seegi doono lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Manchester United ayaa kula ciyaari doonta kooxda Paris Saint-Germain 12-ka bisha soo aadan ee Febraayo garoonkeeda Old Trafford, isla waqtigaasna Neymar Jr ayaa u baahnaan doona inuu maro qaliin isla markaana wuxuu gali doonaa xaalad soo kabasho si uu qeyb kaga noqdo kulanka lugta labaad.
Maxamed Saalax, Mane iyo Xiddigaha kale ee MUSLIMIINTA ah Dartood oo dib loogu dhigay African Cup of Nations....(Ogoow Sababta Cajiibka ah ee ka dambeysa)